सामाजिक मिडिया सर्वेक्षण भन्छ: मालिकहरु माथि बढ्दै | Martech Zone
यस अनुसार २०११ सानो व्यवसाय सामाजिक मीडिया सर्वेक्षण, व्यवसाय मालिकहरूले सामाजिक मिडियालाई गत वर्षको भन्दा बढी गम्भीर रूपमा लिइरहेका छन्। १ मे २०११ - जुलाई १, २०११ बाट गरिएको सर्वेक्षणमा हामीले २1 साना व्यवसाय मालिकहरू (2011० भन्दा कम कर्मचारीहरू भएका कम्पनीहरू) लाई सोधे जुन उनीहरूको सोशल मिडिया खाताहरूको लागि सामग्री सिर्जना गर्दै थिए।
मालिकहरूले शुल्क लिइरहेका छन्
तिनीहरूको प्रतिक्रियाबाट, यो स्पष्ट थियो कि मालिकहरूले सामाजिक मिडियालाई गम्भीरताका साथ लिइरहेका छन् किनकि 65 25% भन्दा बढि उनीहरू सूचित गर्दछन् कि उनीहरू सक्रिय रूपमा सामग्री सिर्जना गर्नमा सामेल छन्। यो प्रतिशत साना व्यवसाय मालिकहरूको बिभिन्न समूहहरूमा पर्याप्त स्थिर थियो, जबसम्म हामी २ XNUMX भन्दा बढी कर्मचारीहरू भएको कम्पनीहरूलाई नदेखेसम्म।
जे होस् उनीहरूको सहभागिता बन्द हुन थाल्छ, यि ठूला कम्पनीहरूका 50०% मालिक अझै सम्मिलित छन्। यो स्पष्ट छ, तथापि, यी कार्यकारीहरूले अरूलाई सामाजिक मिडिया सामग्री निर्माणको लागि अधिक जिम्मेवारी सुम्पिरहेका छन्।
जो सोशल मिडिया सामग्री निर्माण को मालिक हो
धेरै कम्पनीहरूले सोशल मिडियामा डाइभ गर्दै छन्, तिनीहरूको कार्यक्रम छोटो छ किनभने तिनीहरू स्पष्ट रूपमा भूमिका परिभाषित गर्दैनन्। तिनीहरू कसले सामग्री, कहिले र के को बारे मा निर्धारण गर्न असफल।
म भन्दा बढी देखेर निराश भएँ the अध्ययनमा कम्पनीहरूले ग्राहक र अवसरहरू सामग्री जेनरेटरहरूको रूपमा लिईरहेका छैनन्।
प्रशस्तिपत्र र चेक-इनहरू, प्रायः सोधिने प्रश्न र छलफलहरू सम्म कम्पनीहरूले यी क्षेत्रहरू सक्रिय रूपमा सामेल नगरेर ठूलो अवसर गुमाइरहेका छन्।
यो कम्पनी द्वारा भिन्न छ जबकि कडा स are्केत छन् सामाजिक मिडिया २०११ मा अधिक गम्भीरताका साथ लिइएको छ। उदाहरणका लागि: इंटर्नको भूमिकालाई विचार गर्नुहोस्। हाम्रो २०१० को फेसबुक अध्ययनमा, staff०% भन्दा बढी व्यवसायहरू जसले स्टाफमा इन्टर्न राखेका थिए सो दर्शाए कि इंटर्न सामाजिक मिडिया सामग्री निर्माणमा संलग्न छ।
हाम्रोलागि यस तथ्यले देखाउँदछ कि कम्पनीहरूले वास्तवमै गम्भीर रूपमा उपकरणहरू लिइरहेका थिएनन्। यदि तिनीहरूसँग छन् भने तिनीहरू सामग्री समूहको नेतृत्व लिन आफ्नो टीमको कम से कम अनुभवी सदस्यमा भरोसा गर्दैनन्। यस वर्षको अध्ययनमा, केवल s०% कम्पनीहरूले इंटर्नसको साथ तिनीहरू सामग्री निर्माणमा संलग्न भएको संकेत गरे।
जबकि धेरै व्यवसाय मालिकहरू सोच्छन् कि सोशल मिडिया यो एक प्रकारको गतिविधि हो, त्यहाँ मार्केटिंग र सोशल मिडिया फर्महरूलाई उनीहरूको प्रयासलाई समर्थनमा राख्ने बढ्दो चासो छ। कुलमा, अध्ययनमा लगभग १०% कम्पनीले बाहिरी फर्म सक्रिय रूपमा कम्पनीको सोशल मिडिया कार्यक्रममा संलग्न रहेको संकेत गरे। जब म आशा गर्दछु कि ठूला फर्महरूले मद्दतको लागि बाहिर हेरेका छन्, range-१० व्यक्तिको दायरामा रहेको उल्लेखनीय संख्यामा कम्पनीहरूले पनि बाह्य स्रोतहरू खोजिरहेका थिए।
आश्चर्यजनक कुरा के हो भने, ११ - २ employees कर्मचारीहरू भएको कम्पनीहरूले बाहिरका फर्महरू कम प्रयोग गर्ने सम्भावना थियो। किन? हामी यो आकार मा अनुमान लगाउँछौ, कम्पनीहरूसँग स्टाफमा कोही छ जोसँग मिडिया सोशल गतिविधिहरूमा समर्पित गर्न समय छ। अपेक्षित रूपमा, सबैभन्दा ठूला कम्पनीहरूमा पनि समर्पित सामाजिक मिडिया कर्मचारी हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। टिप्पणीहरूले पनि यो आफैंमा र हायर-ए-प्रो शिविरहरू बीचको द्वन्द्व देखाउँदछ।
व्यवसाय मालिकहरू सामाजिक मिडियाको साथ मद्दत लिनको बारेमा के भन्छन्?
कसैलाई नियुक्त गर्नुहोस् खाताहरू सेट अप गर्न र तपाईंलाई सिकाउनुहोस् कि कसरी तिनीहरूलाई प्रभावी ढंगले प्रबन्ध गर्न। यो समयमै सबैसँग जारी राख्न गाह्रो छ।
तपाईंको सोशल मिडियामा प्रोफेसनल गर्नुहोस्। तपाइँ सीपीए भाँडामा लिनुहुन्छ किनभने तपाइँ लेखा गर्न सक्नुहुन्न, एक सामाजिक मिडिया पेशेवर राख्नुहोस्।
आजका दिनहरू सबै एक "सामाजिक मिडिया विशेषज्ञ" हुन् तपाईलाई उनीहरूले जति जान्दछन्।
कसैलाई काममा लगाउनुहोस् जसले तपाईंलाई शिक्षा दिन सक्छ, सोशल मिडिया उपकरणहरू पाउनुहोस् र तपाईंको ब्रान्डको साथ प al्क्तिबद्ध गर्नुहोस्।
सामाजिक मिडिया अँगालो तर सामाजिक मीडिया "विशेषज्ञहरु" र परामर्शदाताहरु को लीयर हुन।
के तपाईं पूर्ण सर्वेक्षण परिणामहरूको प्रतिलिपि चाहनुहुन्छ? तपाईं बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ राउन्डपेग, एक इंडियानापोलिस सामाजिक मिडिया फर्म.